Qado sharaf si heer sare ah loo soo agaasimay oo magalada diridhabe loogu Qabtay. | ogaden24
Qado sharaf si heer sare ah loo soo agaasimay oo magalada diridhabe loogu Qabtay.
Jan 11, 2019 - Aragtiyood
Haldoorka dumarka diridhabe ayaa qada sharaf u sameeyey; xubno ka tirsan isbahysiga soomaaliyeed ee xorriyadda ee sugan isla magaalada diridhaba waxaa na hoggaaminayey mudane Dr. Sakariye oo ah Gud- ku xigeenka isbaysiga ah na guddoomiyaha ururka SRDA!
Martigaliyadu markay dhammaatay waxaa hallo muhiim ah goobta ka jeediyey; waxgaradka iyo aqoonyahanka magaalada ee ka soo qaybgalay qado sharafta, waxaana ka mid ahaa dadkii madasha ka hadlay; mudane halgame Xukun gaas xaruur, Dr. Sakariye iyo aadan allaale oo ah siyaasi caan ah oo ka faallooda arrimaha geeska afrika.
Masuuliyiintaas ayaa carrabka ku adkeeyey: xaaladda kala guurka ah ee dalku ku jiro iyo sidii looga faa’iideysan lahaa isla markaana loo mideyn lahaa shacba soomaali-galbeed . Waxayna soo jeediyeen in dadka soomaaliyeed taageeraan isbaysiga soomaaliyeed ee xorriyadda (Somali coalition for freedom).